I-CRM Inqubomgomo Yobumfihlo | CompanyHub
Ngena ngemvume Bhalisela Cela i-Demo
Ukwaziswa kwakho kubalulekile kithi njengoba kunjalo kuwe futhi sizibophezele ukuvikela ulwazi lwakho. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza CompanyHub izinqubomgomo zangaphakathi zokuqoqa, ukusetshenziswa, ukugcina, ukwabelana nokuvikelwa kolwazi lwakho lomuntu siqu. Ucelwa ukuba ubuyekeze le Nqubomgomo Yobumfihlo ngaphambi kokusebenzisa izinhlelo zokusebenza zeWebhuHubhu, ngaphambi kokufinyelela nokubhalisa ngokusebenzisa iwebhusayithi www.companyhub.com kanye / noma wonke amasayithi ahlobene, izinhlelo zokusebenza, amasevisi namathuluzi kungakhathaliseki ukuthi uyifinyelela kanjani noma uwasebenzise kanjani. Isicelo seNkampaniHub, iwebhusayithi kanye nawo wonke amasayithi ahlobene, izinhlelo zokusebenza, amasevisi namathuluzi ezilandelwayo ngokubambisana I-Platform ye-CompanyHub.
Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kwe-Platform ye-CompanyHub kuzothathwa njengokwamukelwa kwakho okwenziwe yiNqubomgomo Yobumfihlo.
Sigcina amalungelo ethu ukuchibiyela le nqubomgomo nganoma yisiphi isikhathi ngokuthumela inguqulo ebuyekeziwe kwi-Platform yeNkampani. Inguqulo ebuyekeziwe izosebenza ngesikhatsi siyithumela. Uma ngabe inguqulo ebuyekeziwe ihlanganisa ushintsho olukhulu, sizokunikeza izinsuku ze-7 ngaphambi kwesaziso ngokuthumela isaziso soshintsho esigabeni "Sokubuyekezwa Kwemigomo" se-Platform yeNkampani. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kwe-Platform yeNkampani ngemuva kokuphela kwalezi zinsuku ze-7 kuzobhekwa njengemvume yakho ecacile kuzo zonke izichibiyelo kule nqubomgomo.
Kule nqubomgomo, igama elithi "ulwazi lomuntu siqu" lusetshenziselwa ukuchaza ulwazi olungathintana nomuntu othize futhi lungasetshenziswa ukukhomba lowo muntu. Asicabangi ngolwazi lomuntu siqu lokufaka ulwazi olwenziwe olungaziwa ukuze lungabonakali umsebenzisi othize.
Ukuqoqwa kokwaziswa komuntu siqu
Kuzodingeka ukuthi unikeze ulwazi lwakho lomuntu siqu, lochwepheshe nolwazi lwebhizinisi ukufinyelela ku-Platform yeNkampani. Uyavuma ukuthi uyadalula lolu lwazi ngokuzithandela. Uma ungafisi ukudalula lolu lwazi, okhululekile ukukwenza, kungenzeka ukuthi ngeke ukwazi ukuthola izinsizakalo ezithile ezinikezwe i-Platform yeNkampani. Ngokusebenzisa i-Platform ye-CompanyHub nganoma iyiphi imodemu, ubonisa ukwamukelwa kwakho emigomo yale Nqubomgomo Yobumfihlo.
Uma Usigunyaza ukufinyelela i-Akhawunti Yakho Ye-Google, sizokhipha zonke izingxoxo zakho ze-imeyili ezinyangeni zokugcina eziyisithupha (6) kusukela ngosuku lokubhalisa. Amasistimu ethu azobe ahlaziye lawa ma-imeyili futhi ahlukanise oxhumana nabo obalulekile ngokusekelwe engxoxweni yakho ye-imeyili.
Lonke ulwazi olufakwe kwi-Platform yeNkampani kanye nolwazi oluqoqwe yi-CompanyHub Platform luzogcinwa kithi. Singase futhi sicele ulwazi olwengeziwe mayelana namadili akho kanye nemisebenzi yakho, njenge:
Ulwazi lokuxhumana, njengegama lakho, ikheli, ifoni, i-imeyili nolunye ulwazi olufanayo lwamakhasimende / amakhasimende / umkhombandlela wakho
Ibhizinisi eliningiliziwe kanye / noma ulwazi lomuntu siqu njengosuku lwakho lokuzalwa noma Usuku lokubhalisa kanye nenombolo ye-akhawuntini engapheli (PAN). Futhi ulwazi olunjengekheli lakho lehhovisi, isigaba sebhizinisi kanye nohlobo lwenhlangano njll.
Uma ulanda noma usebenzisa izinhlelo zethu ze-CompanyHub, noma ufinyelela ku-Platform yethu ye-CompanyHub, singathola ulwazi mayelana nendawo yakho nedivayisi yakho yeselula, kufaka phakathi isihlonzi esiyingqayizivele sedivayisi yakho. Singasebenzisa lolu lwazi ukukunikeza amasevisi asekelwe endaweni, njengokukhangisa, imiphumela yokusesha, kanye nokunye okuqukethwe komuntu siqu. Amadivayisi amaningi weselula avumela ukuthi ulawule noma ukhubaza amasevisi wendawo kwimenyu yokuhlela yedivayisi. Uma unemibuzo mayelana nokuthi ungakhubaza kanjani amasevisi wendawo yedivayisi yakho, sincoma ukuthi uxhumane nomthwali wenethiwekhi yakho yesevisi noma idesksi yesevisi yomkhiqizi wakho wedivayisi yeselula.
Ungakhetha ukusinikeza ukufinyelela kolwazi oluthile lomuntu siqu olugciniwe ngabangaphandle njengamasayithi omphakathi wezokuxhumana (isib. Facebook ne-Twitter) noma i-Akhawunti ye-imeyili ye-Google. Ulwazi esingaluthola luhlukahluka kusuka kwisayithi kuya kwesayithi futhi lulawulwa yiwebhusayithi ngayinye. Ngokuhlanganisa / ukuxhumanisa i-akhawunti ephethwe umuntu wesithathu ne-akhawunti yakho kwi-Platform ye-CompanyHub, uyasigunyaza ukuthi sithole lolu lwazi futhi uyavuma ukuthi singakuqoqa, sigcine futhi sisebenzise lolu lwazi ngokuhambisana nale Nqubomgomo Yobumfihlo.
Indlela Esisebenzisa Ngayo Ulwazi Lomuntu siqu, lochwepheshe kanye neBhizinisi
Injongo yethu eyinhloko ekuqoqeni ulwazi lomuntu siqu, lochwepheshe nolwazi lwebhizinisi ukukunikeza ulwazi oluphephile, olushelelayo, olusebenzayo, nolwenziwe nge-CRM. Singasebenzisa lolu lwazi ku:
inikeze ukwesekwa kwamakhasimende
ukucubungula ulwazi nokuthumela izaziso / izibuyekezo / izikhumbuzi mayelana nemihlangano / othintana nabo
ukuxazulula izingxabano, ukuqoqa izimali, nokuxazulula izinkinga
ukuvimbela imisebenzi engavinjelwe noma engekho emthethweni, futhi sigcizelele isivumelwano sethu somsebenzisi
ukwenza ngokwezifiso, ukukala, nokuthuthukisa izinsizakalo zeNkampaniHub nokuqukethwe, isakhiwo, nokusebenza kwamawebhusayithi ethu, ukuxhumana, amathuluzi nezinhlelo zokusebenza
ulethe ukumaketha okuhlosiwe, izaziso zokuvuselela izinsizakalo, nezinhlinzeko zokukhangisa ngokusekelwe kokuncamelayo kokuxhumana kwakho
xhumana nawe ngenombolo yeselula ehlinzekwe nguwe, ngokubeka ikholi yezwi noma ngokusebenzisa umbhalo (SMS) noma imibiko ye-imeyli
qhathanisa ulwazi lokunemba futhi uqinisekise nabo
Ukwabelana ngolwazi lomuntu siqu
Asithengisi noma ukuqasha ulwazi lwakho lomuntu siqu, lochwepheshe nolwazi lwebhizinisi kumalungu wesithathu ngenjongo yokukhangisa ngaphandle kwemvume yakho ecacile. Singase sihlanganise imininingwane yakho ngolwazi esiqoqa kusuka kwezinye izinkampani futhi silisebenzise ukuze sithuthukise futhi senze izinsiza zeNkampaniHub, ukuxhumana nokuqukethwe. Uma ungafisi ukuthola ukuxhumana kwezokukhangisa kusuka kithi noma uhlanganyele ekukhusheni kwethu, landela izinkomba ezinganikezwa ngaphakathi kokuxhumana.
Ukuqoqwa nokusetshenziswa kwamakhukhi nolwazi ngokusebenzisa ubuchwepheshe obufanayo
Siqoqa izinhlobo ezilandelayo zolwazi ukuze sikunikeze ukusetshenziswa nokufinyelela kwi-Platform ye-CompanyHub, futhi usisize ukuba sizenzele futhi sithuthukise isipiliyoni sakho:
Uma uvakashela i-CompanyHub Platform, siqoqa ulwazi oluthunyelwe kithi ngekhompyutha yakho, ifoni yakho noma enye idivayisi yokufinyelela. Ulwazi oluthunyelwe kithi lubandakanya, kepha alukhawulelwe, idatha mayelana namakhasi owafinyelela, ikheli le-IP yekhompyutha, i-ID yedivayisi noma i-identifier eyingqayizivele, uhlobo lwedivayisi, ulwazi lwe-geo-indawo, ulwazi lwekhompyutha nolwazi, uxhumano lwenethiwekhi yeselula, izibalo ukubuka kwekhasi, ukuhamba kwezimoto nokuya kumasayithi, i-URL yokudlulisela emuva, idatha yesikhangiso, nedatha ye-log yewebhu ejwayelekile njll.
Uma ufinyelela ku-Platform ye-CompanyHub, thina (kufaka phakathi izinkampani esisebenza nabo) zingafaka amafayili amancane kwedatha kukhompyutha yakho noma kwenye idivayisi. Lawa mafayela wedatha angaba amakhukhi, amathegi we-pixel, ama-Flash cookies, ama-beacons ewebhu noma esinye isitoreji sendawo esinikezwe isiphequluli sakho noma izinhlelo zokusebenza ezihambisanayo (ngokubambisana "Amakhukhi"). Sisebenzisa la makhukhi ukukubona njengomthengisi; ngokwezifiso amasevisi wethu, okuqukethwe, nokuxhumana; qhathanisa ukusebenza kwezokuxhumana; siza ukuqinisekisa ukuthi ukuphepha kwe-akhawunti yakho akukethonywanga; ukunciphisa ingozi nokuvimbela ukukhwabanisa; futhi ukukhuthaza ukuthembela nokuphepha kuwo wonke amasayithi ethu nezinsizakalo zethu. Ukhululekile ukunciphisa amakhukhi ethu uma imvume yakho yokufaka isiphequluli noma isiphequluli, ngaphandle kokuthi amakhukhi ethu adingekayo ukuvimbela ukukhwabanisa noma ukuqinisekisa ukuphepha kwamawebhusayithi esiwalawulayo. Noma kunjalo, ukwehla amakhukhi ethu kungaphazamisa ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi kanye / noma izici zethu zesevisi.
Ukuze ukukusize ekukhwabaneni nasekusetshenzisweni kabi kolwazi lwakho lomuntu siqu, lolwazi nolwazi lwebhizinisi, singase siqoqe ulwazi ngawe kanye nokuxhumana kwakho ne-website yethu noma amasevisi we-CompanyHub. Singahlola futhi ikhompyutha yakho, ifoni ephathekayo noma enye idivayisi yokufinyelela ukukhomba noma iyiphi isofthiwe noma umsebenzi ononya.
Indlela esivikela ngayo nokugcina ulwazi lomuntu siqu
Sigcina futhi sisebenzise ulwazi lwakho lomuntu siqu ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu ebanjwe kumavava we-"Amazon Cloud" avikelekile kakhulu. Sinezizinda zethu ezibhalisiwe namalayisensi afanele ukuqinisekisa ukuphepha kwewebhu. Sivikela ulwazi lwakho ngokusebenzisa izinyathelo zokuphepha ezomzimba, ezobuchwepheshe, nezokuphatha ukunciphisa izingozi zokulahleka, ukusetshenziswa kabi, ukufinyelela okungagunyaziwe, ukudalulwa nokuguqulwa. Ezinye izivikelo esizisebenzisayo yizibhamu kanye nokubethelwa kwedatha, izilawuli zokufinyelela ngokomzimba ezikhungweni zethu zedatha, nokulawulwa kokugunyazwa kokufinyelela kolwazi.
Indlela Esabelana Ngayo Ngobuntu, Ulwazi Lobuchwepheshe Nebhizinisi namanye amaThathu
Singabelana ngolwazi lwakho lomuntu siqu, lochwepheshe nolwazi ngebhizinisi:
Abanikezeli bezinsizakalo ngaphansi kwenkontileka abasiza ngemisebenzi yebhizinisi lethu, njengokuvikela ukukhwabanisa, ukukhangisa, kanye nobuchwepheshe. Izivumelwano zethu zithi abahlinzeki bezinsizakalo basebenzise ulwazi lwakho kuphela mayelana nezinsizakalo abenza kithi hhayi ngokuzuzisa kwabo noma ngokuphula izinqubomgomo zethu zobumfihlo.
Ukuphoqelelwa komthetho, izikhulu zikahulumeni, noma ezinye izinhlangano zesithathu ngokulandela i-subpoena, umyalelo wenkantolo, noma enye inqubo yomthetho noma imfuneko esebenzayo kithi noma omunye wabathintekayo bethu; lapho kudingeka sikwenze ukuze sihambisane nomthetho; noma lapho sikholelwa, ngokubona kwethu kuphela, ukuthi ukudalulwa kolwazi lomuntu siqu, lochwepheshe nolwazi lwebhizinisi kuyadingeka ukuvimbela ukulimala ngokomzimba noma ukulahleka kwezimali, ukubika umsebenzi osolwa ngokungemthetho noma ukuphenya okunye ukwephula.
Londoloza Isikhathi Nge-imeyili
Iphayiphu Yokuthengisa & Imibiko
I-Nashik - 422101,
I-1 415 315 9615 (US), + 91 9960371371 (IND)
Itholakala kuApp Store Qalisa -Google Play
I-Copyright © 2016 CompanyHub. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Qalisa. Akukho ukusetha okudingekayo.
Ungathanda Ukudlala Nge-akhawunti Ye-Demo?
Akukho Ukubhalisa Okudingekayo. Idatha yesampula ekhona.
Sizokubiza maduzane kudemo
Siyabonga! Sizoxhumana nawe maduzane.